Ogaden News Agency (ONA) – Baroordiiq Ku socota Soomaaliwayn Kadib Markii Madaxwaynehoodii Itoobiya Ceel Dheer Ku Riday! By: Xaaji M/Rashiid,
Baroordiiq Ku socota Soomaaliwayn Kadib Markii Madaxwaynehoodii Itoobiya Ceel Dheer Ku Riday! By: Xaaji M/Rashiid,
Posted by Daljir	/ August 28, 2016
Hordhac: Dalka jamhuriyada somalia 25tii sano ee u dambeeyay waxaa isu badalay taariikho kala duwan oo u badnaa kuwo ay naftu ka naxdo, waxaana ugu wacnaa maamulkii Tiir dhexaadka u ahaa oo meesha kabaxay. Markay taasi dhacday ee qabiil waliba hortiisa u dhaqaaqay waxaa hogaanka u qabtay kooxo budhcad dhuleed ah oo ka tirsanaa ciidankii qalabka siday ee dalka kuwaasoo sirtii ciidamada ee wadanka u gacan galiyay cadowga itoobiya oo uu horboodayay KT Males Zanawi.
Waxaa caado u ahaa askartaas inay itoobiya u noqdaan Mindidii lagu qalayay dalka somalia si toos ah iyo si dadban labadaba, waxayna kasoo shaxaadayeen hubka ay dadkooda ku gumaadayeen dalkana ay ku duminayeen.
Hadaan hordhaca intaas ku dhaafo waxaa shir rasmi ah isugu yimid guud ahaan umada soomaaliyeed kaasoo ka dhacay wadanka Jabuuti oo gogosha fidiyay, dawladaha caalamkuna u aqoonsadeen inuu yahay shir dib u heshiineed kadibna lagu doortay Cabdiqaasim salaad. kama hadlayo in shirkaas daacad laga ahaa iyo inkale, balse waa sidii umada umuuqatay. Nasiib darada ka dambaysay waxay ahyd in dawladaasi ay wax tilaabo ah qaadi kari wayday, sabakuna wuxuu ahaa siyaasada itoobiya oo hor istaagtay in la qaado waxyaabihii aasaasiga ahaa ee dawladnimo, halkaas ayayna ku fashilantay dawladii Cabdiqaasim Salaad oo ahayd mid aad loogu hanwaynaa waqtigaas.
Markii intaas laga yimaado waxaa isku daba xigay wax lagu sheegay dawlado iyo doorashooyin kuligood wada ahaa shimbirayohow heesa. Magaca loogu wanqali jiray wuxuu ahaa “dawlad ku meel gaadh ah”. Makii lasoo gaadhay Dawlada uu madaxa ka yahay xasan sheekh waxay nasiib u heshay in laga gudbo ku meel gaadhnimada loona gudbo mid rasmi ah.
Su´aashu waxaa weeye maxaa laga sugayay xasan sheekh dawldiisa maxayse noqotay? Waxaa heleen xasan iyo dawladiisu fursado qaali ah iyo dhaqaale mahiigaan ah oo sida roobka ugu soo daatay. Waxaa la furay dhamaan hay´adihii dawliga ahaa oy ku jiraan Safaaradihii oo boodhka laga jafay iyo waliba sidoo kale kuraasidii caalamka lagu lahaa ilaa kii UNka. Sidaa awgeed waxaa laga sugayay ina sheekh inuu la caweeyo siyaasadaha caalamiga ah isagoo la jaanqaadaya raga dhigiisa ah ee Aduunka maamulaya. Waxaaa kale oo laga sugayay inuu soo dhiciyo xuquuqaadkii laga boobay umada soomaaliyeed mudadii 20ka sano ahayd, haday ahaan lahayd Bada, Barriga ama Hawadaba. Waxaa laga sugayay dawladiisa waxaa kamid ahaa inay diiraada saarto xuduudaha dalka ee haawanaya ee cid waliba goortay doonto iska galayso, shacabka xuduudaha ku sugana laga difaaco cadowga. Waxaa kale oo laga sugayay inuu dalka gobol gobolka u kala goáy isu soo celiyo si dhidibada loogu taago Qaranimadii dalka. Anigoo soo koobaya intaasi waa wax ka mid ah wixii laga sugayay xasan sheekh iyo dawladiisa.
Hadaan umada soomaaliyeed u ifiyo wax ay noqotay dawladii xasan sheekh waa wax yaab leh. inkasta oo dadwaynaha somaaliyeed ayna moogayn siyaasada foosha xun ee xasan sheekh hadana waxaan jeclahay inay ila wadaagaan dareenkaas. Inta uu kursiga ku fadhiyay xasan sheekh waxaa dalka soomaaliya soo gaadhay amni xumo, dhaqaale xumo, Qabyaalad iyo siyaasad xumo baahsan. Xaga amniga hadaan ku horreeyo majirto goob ay dawlada xasan amaan ka dhigtay xataa haday ahaan lahayd Madaxtooyada iyo Garoonka xamar. Xaga dhaqaalaha majirto hay´ad ay dawladu leedahay oo isku filan waxaana arintaa sii xoojiyay musuqmaasuqa oo gaadhay heerkii ugu sareeyey madaama aysan jirin cid isla xisaabtameysa!. Xaga qabyaalada waxaa makhraati ah calaacalka kasoo yeedhaya jilibada soomaaliyeed xataa haday noqoto qoyska uu ka dhashay. Xaga siyaasad,xumada waa mida keentay inuuna kaba hadlin qabiilo dhan oo ciidamada itoobiya xasuuqeen, taasoo badalkeeda uu ka dhigay inuu yidhaaho waxaanu horumarka kaga dayanaynaa Itoobiya! waxaa intaa dheer inuu dhiiga umada soomaaliyeed ee meel walba ku daadanaya kaga jawaabo qosol iyo jeesjees aan kala joogsi lahayn!
Maxaa kala gudboon umada ku abtirsata Jamhuriyada Soomaaliya Ficilada Xasan Sheekh-
Waxaan si kal iyo laab ah ugu soo jeedanayaa umada soomaaliyeed inay kor u qaadaan Madaxooda oy indho caafimaad qaba ku eegaan waxa hareerahooda kasocda ee ah in la diidday madax farabadan oo dalkoodii iyo dadkoodaba khiyaamay, kadibna dadwaynihii ku yaaceen iyagoo qoob iyo qaylo ah. Waxaa waajib ku ah Waxgaradka, Aqoonyahanka, Culimada iyo waliba Saxaafada inay ka horyimaadaan Taliska xasan sheekh ee dhuuni qaataha ah oy u sahlantahay inuu ku badasho xoogaa Doolar ah dalka, dadka iyo diintaba! Dalka soomaaliyeed oo ah mid halis ku jira wuxuu ku badbaadi karaa in kacdoon lagala horyimaado xasan sheek doorashada inagu soo food leh, isla markaana ay doortaan wadani iimaanka qaba oo kanaxaya dalka iyo dadka!
Dusha sare ciwaanka saaran wuxuu sheegayaa inaan Baroordiiq u dirayo soomaaliwayn, taasina waa mid ay si sahlan ay ku fahmi karaan dadka badankiisu. Gabay uu Abwaan hore mariyay waxaa ka mid ahaa” Nin dhagmaayo uurka ugashaan dhimana noolayne” Waxaa xaaladaas ku sugan xasan sheekh oo ku magacaaban Madaxwaynaha dalka soomaaliya. Mar haduu yahay nin jacaylkii Axmaaradu uurka u galay, waa nasiib darro ku habsatay umada soomaaliyeed waxayna mudan yihiin in looga tacsiyeeyo!.
Si kastaba ha ahaatee waxaa iska cad in Madaxwaynaha soomaaliya ay itoobiya Ceel dheer ku riday oo xataa hadii loo gurman lahaa oo la doono in laga soo saaro uuna isaguba diyaar u ahayn! Mana laha wax daawo ah oon ahayn in laga tuuro kursiga dib dambana uuna usoo galin masiirka siyaadsadeed ee Soomaaliya!